Posted by zizawa ⋅ 28/05/2010	⋅ 96 Comments
Posted by tint oo | 28/05/2010, 22:50 Reply to this comment	That’s interesting. Who/which org is giving the national leadership? Thanks for the suggestion regarding the media. I’m about to say something about red dragon book club in the next chapter not the role of media in general for fear of over-extending the subject. Perhaps l’ll save it for the next topic. sincerely…
Posted by zizawa | 28/05/2010, 23:00 Reply to this comment	Who/which org is giving the national leadership?
Posted by tint oo | 28/05/2010, 23:08 Reply to this comment	‘ဒီပေါ်လစီရဲ့ အနှစ်သာရကတော့ ဗမာအမျိုးသားတွေကို ကိုယ့်အမျိုးပေါ်ဂုဏ်ယူဖို့နဲ့ တချိန်ထဲမှာ ဗမာပြည်ဟာ ဗြိတိသျှ အင်ပိုင်ယာကြီးထဲမှာ သစ္စာရှိရှိ နေသွားဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ဘယ်လို ဖော်ဆောင်မလဲ ဆိုတာ စဉ်းစား လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆိုတာပဲ ဖြစ်တယ်။’
Posted by watote | 28/05/2010, 23:22 Reply to this comment	`ခပ်မိုက်မိုက် လူငယ်တစု´ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကို သဘောကျပါတယ်။ လူငယ်တွေ ဒီလိုသုံးရဲမှာမဟုတ်သလို၊ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အရှိန်နဲ့ ဒီအသုံးအနှုန်းကိုတောင် မအီမလည်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 29/05/2010, 02:24 Reply to this comment	ကိုမန်းကိုကို ပြောတာ ဆက်လေ့လာချင်စရာကောင်းတယ်။ ကိုလိုနီခေတ် ဗမာပြည် ပညာရေးပုံစံနဲ့ အဲဒိအချိန်က သူတို့တိုင်းပြည်တွေက ပညာရေးပုံစံ ဘယ်လို ဘယ်လောက် ကွာလဲဆိုတာ ဆက်လေ့လာချင်စရာကောင်းတယ်။ အင်္ဂလန်မှာလည်း အဲဒိတုန်းက တက္ကသိုလ် တက်နိုင်သူဦးရေဟာ ခုအချိန်နဲ့စာရင် အများကြီးနည်းတယ်။ နောက်ကိုလိုနီ အစိုးရရဲ့ တချို့ ပေါ်လစီတွေနဲ့ (ရည်ရွယ်ချက် ဘယ်လိုထားထား) တချို့ စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကြောင့် ဗမာပြည်ဟာ ပညာရေးပိုင်းမှာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေထက်တော့ အဆင့်မြင့်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ပြောခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေထဲမှာ J S Furnivall နဲ့ ဒေါက်တာသန်းထွန်းတို့ဆရာ Gordon Luce တို့ကို ထောက်ပြကြတယ်။ Luce ရဲ့ ယောက်ဖ ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုလည်း ကိုလိုနီခေတ်မှာ ပညာရေး အတွက် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေထဲ ထည့်ပြောသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုလိုနီပညာရေးဟာ မကောင်းမြင်စရာ မရှိဘူးဆိုတာကတော့ အငြင်းပွားစရာပါ။ ကျနော်လည်း ခုစာရေးချိန်မှာ အထောက်အထား ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှိလို့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ သိပ္ပံနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေ ကိုလိုနီခေတ်မှာ ဘယ်နှစ်ယောက် ထွက်လဲ။ လူဦးရေ တသိန်းအတွက် ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ ဘယ်နှစ်ယောက် မွေးထုတ် ပေးနိုင်လဲ။ မွေးထုတ်ပေးနိုင်လောက်အောင် ကျောင်းတွေရော ဘယ်လောက် ရှိခဲ့လဲ။ ဒါတွေကို လေ့လာကြည့်ဖုိ့ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
Posted by Watote | 29/05/2010, 09:16 Reply to this comment	စိတ်ဝင်စားပါသည်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါတဲ့ ဒဂုန်တာရာ ရေးတဲ့ ရုပ်ပုံလွှာ “အောင်ဆန်း သို့မဟုတ် အရိုင်း” ကို သတိရမိတယ်။ သတိရမိတယ် ဆိုတာ သေချာ ဖတ်ခဲ့ဖူးလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအရွယ်က ဒါတွေ ဖတ်ဖို့ သိပ်စိတ်မဝင်စားခဲ့မိဘူး။ ခုမှ မဖတ်ခဲ့မိတာ နည်းနည်းနောင်တ ပြန်ရနေတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာဒဂုန်တာရာက “ကျွန်တော် ကိုအောင်ဆန်းကို …… ဘူး။ ကိုဗဟိန်းပဲ …… တယ်” ဆိုတဲ့ စကားကြီးတစ်ခွန်း ပြောခဲ့ဖူးလို့ လှုပ်သွားသေးတာ မှတ်မိနေတယ်။ ခု ထပ်လှုပ်သွားမှာစိုးလို့ …… နဲ့ပဲ ပြန်ရေးရတာ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဆရာဒဂုန်တာရာလိုလူက တိုင်းပြည်မျက်ရှုတစ်ယောက်ကို အဲလို ပြောလိုက်တာ၊ အဲလို ပြောတာကို ထည့်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းကလည်း ပြန်ထည့်တာကို ခုချိန်ထိ အံ့သြလို့ မဆုံးဘူး။
Posted by Rita | 29/05/2010, 03:02 Reply to this comment	ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် bro ပြောတဲ့ “မဖြစ်ခဲ့တာကို ပြန်ပြောင်းစိတ်ကူးယဉ်တာကို သမိုင်းဘာသာရပ်မှာ ခွင့်ပြုမထားဘူး။ ဖြစ်ပြီးခဲ့တာနဲ့ သူ့ရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကိုပဲ လေ့လာ သုံးသပ်ခွင့်ရှိတာ ဖြစ်တယ်။” ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံမိပါတယ်။ ဒါဖြစ်ခဲ့လို့ ဒီလိုဆိုရင် ဒါမဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတာ ဆက်တွေးမိကြမှာပဲ။ အတူတူပဲလားလို့။
မတူဘူးထင်တယ်။ ဥပမာ မိုးရွာလို့ လမ်းပေါ်ရေတွေ အိုင်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုးမရွာလည်း လမ်းပေါ် ‘တခြား အကြောင်းတခုခုကြောင့်’ ရေအိုင်နိုင်တာပဲမလား။ ဒီတော့ ရေအိုင်နေတာကိုပဲ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။ brotherly….
Posted by Watote | 29/05/2010, 09:24 Reply to this comment	Rita
Posted by tint oo | 29/05/2010, 06:17 Reply to this comment	၀တုတ်
Posted by tint oo | 29/05/2010, 06:23 Reply to this comment	What (U) Tint said is right. Having covered the background and history of Burma around WWII, we should also address the consequences and their influences over the post-independent parliamentary era.
Posted by Nanda | 29/05/2010, 07:13 Reply to this comment	Home rule means thatacountry under British rule which would accept Qeen/King as Head of state and autonomy in admin matters except defence and foreign affairs .
Posted by tint oo | 31/05/2010, 08:49 ဦးဖေမောင်တင်အပါအ၀င်ပေါ့နော် ဗမာပီသတဲ့scholars တွေပေါ်လာတာဟာ နောက်တချိန်မှာ လွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုမှုတွေရဲ့အဦးအစလို့မြင်နေတယ် ။ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ ပေါ်လစီဟာ အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါ။
Posted by tint oo | 29/05/2010, 06:28 Reply to this comment	http://irelandsown.net/revival.html
Posted by tint oo | 29/05/2010, 06:30 Reply to this comment	“မြန်မာပြည် ကိုလိုနီခေတ်ပညာရေးကိုကော ကိုဝတုတ်နဲ့ ကိုတင့်ဦးတိုဘယ်လိုသဘောရလည်း ပြောပြကြပါအုံး။ ”
Posted by tint oo | 29/05/2010, 08:30 Reply to this comment	Rita
Posted by tint oo | 29/05/2010, 10:57 Reply to this comment	သိန်းဖေမြင့်ရဲ့ ကျော်ငြိမ်းတို့၊ သူတို့အတိတ် သူ့တို့အရိပ်တို့၊ တော်လှန်ရေးကာလ အတွေ့ အကြုံများ စတာတွေကိုဖတ်ပြီး ကျနော်ကတော့ စာရေးသူဟာ ရိုးသားသူ မဟုတ်ဘူးလို့ မြင်တယ်။ သမိုင်းမှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ မရိုးသားဘူးလို့ ကျနော် အခိုင်အမာ ယူဆတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းရော၊ ဦးသိန်းဖေမြင့်ပါ ပါတယ်။ ဦးသိန်းဖေမြင့်ရဲ့ စာပေအရေးအသား ပြောင်မြောက်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှစောဒက တက်စရာ မရှိပါ။ စာအရေးအသားအတွက် အင်မတန်မှ အတုယူစရာကောင်းတဲ့ စာရေးဆရာကြီးလို့ ထင်ပါတယ်။ စာရေးတာ သိပ်ကို စေးစေးပိုင်ပိုင် ရှိလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းတွေကို ခုမပြောဘဲ ထားရင် ကောင်းမယ်။ အချိန်တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
Posted by zizawa | 29/05/2010, 11:23 Reply to this comment	ဆက်ကပါဗျာ၊ ကိုဝတုတ်ပြောမှပဲ ရှင်းတော့တယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 29/05/2010, 12:31 (ခု၂၀၁၀မှာကျတော့ နက်ထဲ ဘလော့ဂါးလို့ ခေါ်နေကြတဲ့ သူတွေတောင် ကိုယ့်နဲနဲထိလာတယ်ထင်ရင် (ဘာသာေ၇းဘလော့ဂါးတွေအပါအ၀င် ) ဒေါသတကြီးနဲ့ ကို ပြန်တီးကြတာဘဲနော်)
Posted by Rita | 29/05/2010, 15:31 Reply to this comment	Sorry ပါ။
Posted by Rita | 29/05/2010, 15:34 Reply to this comment	@ Tint Oo,
Posted by Rita | 29/05/2010, 15:38 Reply to this comment	နောက်တစ်ခု သိချင်တာ ရှိသေးလို့ပါ။ ဦးတင့် သိပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
““ကျွန်တော် ကိုအောင်ဆန်းကို …… ဘူး။ ကိုဗဟိန်းပဲ …… တယ်”” ဆိုတာကရော… အဲဒီ 1946 လောက်က ပြောသွားတာပဲလား။ တေးကဗျာထဲကျမှ ပြောတာလား ဆိုတာ… 1946 လောက်က ဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိဘူး။ 1990s ကျမှ ဆိုရင်တော့ အဲဒါ ကိစ္စရှိတယ်။ (တို့ထိဝေဖန်လို့ မရစကောင်းတဲ့ အရာ မရှိဘူး လို့ ခံယူတဲ့ ကျွန်မအနေနဲ့တောင် အဲဒီ စကားကို 1990s လောက်ကျမှ ပြောတယ်ဆိုရင် အဲဒါ ကိစ္စရှိတယ် လို့ ယူဆမိတယ်)
Posted by Rita | 29/05/2010, 15:59 Reply to this comment	ဟားဟား
Posted by tint oo | 29/05/2010, 16:58 Reply to this comment	(ကိုယ်ဘယ်နှစ်ကဘာလုပ်ခဲ့ပြီ ခုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုး ရေးပြဘို့ ဆို တခြားလူတော့မသိဘူး။ကိုယ်ကရှက်တယ်)
Posted by Rita | 29/05/2010, 17:10 Reply to this comment	အားမနာပါနဲ့။ ပြောကြပါ။ တချို့ကိစ္စတွေက အပြင်မှာ ကော်ဖီသောက်ရင်း လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း အေးအေးဆေးဆေး ပြောကြရင် ကိုယ်ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာ ချက်ချင်းသိမှာ။ အခုက ဖြတ်ဖြတ်ပြီး ဖတ်နေ၊ သိနေ၊ဲငြင်းနေရသလိုမျိုး။ နီးမလိုနဲ့ဝေးနေတာမျိုးဖြစ်နေသလားလို့။ ဒါနဲ့ဝတုတ်ကို ပြောထားတယ်။ zizawa’s refuge ကနေ watote’s refuge လို့ပြောင်းပေးလိုက်တော့မယ်လို့။ အဲဒီလို မရေးပါနဲ့တဲ့။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ ဝတုတ်ရဲ့ပရိသတ်များ မျက်စိညောင်း လက်ညောင်း ခေါင်းခြောက်ဖို့သာ ပြင်ထားပေတော့။ အခုမှ ဘလော့ဆိုတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားသလိုမျိုးစားလဲဒီစိတ်၊ သွားလဲဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်။ အလုပ်သွားတာတောင် ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးစာအုပ်လက်ကကိုင်သွားတယ်။
Posted by zizawa | 29/05/2010, 17:25 Reply to this comment	ဇီ-၀ နားခိုးရာ (Zi-Wa’s Refuge) လို့ နာမည်ပြောင်းပါလား။ (နောက်တာပါ။ :D)
ဒါနဲ့ ဘလော့ဂ်နှစ်ခု ခွဲပစ်ဖို့တော့ စိတ်မကူးဘူး မဟုတ်လား။ စိတ်ကူးတယ် ဆိုရင်တော့ မခွဲဖို့ တောင်းပန်ရမှာပဲ။ ဒါမှ ကိုဝတုတ်အဓိက ပရိသတ်က မဇီဇ၀ါရဲ့ စာတွေလည်း ဖတ်မိ၊ မဇီဇ၀ါအဓိက ပရိသတ်က ကိုဝတုတ်ရဲ့ စာတွေလည်း ဖတ်မိ၊ အဲဒီလို ဖြစ်တာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်တယ်။🙂
Posted by ပိုင် (Pi) | 30/05/2010, 16:38 ကျနော့်ဘ၀က မိန်းမအိမ် ကပ်နေရတဲ့ ဘ၀ပါ ဆရာရယ်။ ဇီ-၀ နားခိုးရာ … ဟားဟား
Posted by zizawa | 30/05/2010, 22:00 လမ်းတော့တော်တော်ချော်လာပြီ
It doesn’t mean that I amnot taking responsibility . It means I am too lazy to keep on doing something I don’t believe asatask of which success is possible . 😛
Posted by tint oo | 29/05/2010, 17:29 Reply to this comment	ဟုတ်တယ်။ အဲဒီခေတ်က ကိစ္စတွေက ကိုယ်ကျော်သွားခဲ့တဲ့ အရာတွေထဲမှာ ပါတယ်။
ပြန်ဖတ်မယ် လုပ်ပေမဲ့ ပြန်ဖတ်ဖို့ကို ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ချော့နေရသေးတယ်။ ဖတ်ဖြစ်အောင်တော့ ဖတ်ရမယ်။ ဒဂုန်တာရာ ရုပ်ပုံလွှာကို တွေ့ခဲ့ရတာ 90 နောက်ပိုင်း။ (တွေ့ခဲ့တာပါ။ ဖတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး) အဲဒီတော့ 90 နောက်ပိုင်းမှ သူပြောတယ်ပဲ အမှတ်မှားနေခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ။ စိတ်ထဲမှာ အဲဒီစကားလုံးကို အင်တာဗျူးပုံစံနဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုမှာ ပြောခဲ့တယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။ အဲဒါလည်း မှားနိုင်ပါတယ်။
(အပေါ်က ကိစ္စကို ပါစင်နယ် ဆွဲယူပြီး ပြောလိုက်တာတော့ မှန်တယ်။ အဲဒါကိုယ့်ကို ပြောတယ်လို့ ထင်တာ မထင်တာထက်၊ ကိုယ့်ကိစ္စကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ အသိဆုံးမို့ ပြောလိုက်တာ။ နောက်တစ်ခုက ဘလော့တွေ အများကြီးကို မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး။ ဘလော့မှာ ချိတ်ထားတဲ့ link တွေကိုတောင် အကုန် လိုက်မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ ဖတ်မိသလောက်တော့ ဖြစ်ကြတဲ့ ပြဿနာမှာ ရေးသူရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ဖတ်သူက တလွဲတွေး၊ ကျော်တွေး၊ လိုရာစွတ်တွေးလို့ ဖြစ်ကြတာချည်းပဲ။ ကိုယ်က ဒီလို မဆိုလိုဘဲ ဒီလို ဆိုလိုပါတယ် လို့ ပြောလို့ ဖြစ်ကြတာမျိုးပဲ တွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ ဥပမာ – ကိုပေါ မှာ၊ ညလဆမှာ စသဖြင့်။
ဥပမာ – လောလောဆယ် ညလဆ ရေးလိုက်တဲ့ ကျေးဇူး ကိစ္စမျိုး။ ညလဆက ဘယ်ဆရာဝန် ဘယ်ကျောင်းဆရာမှ ကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူး ပြောတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ပြောနေကြပြန်ပြီ။ သိသလောက် ပြဿနာတွေပဲ ဒါမျိုးချည်းပဲ။ ဒါတွေကို ရှင်းချင်လို့ ရှင်းမယ်ဆို ကိုယ်က “ဘာ” ဆိုတာမျိုးနဲ့ အလုပ်ရှင်ကို အရည်အချင်းပြသလို ရှင်းစရာမလိုဘူး။ ကိုယ်က “ဘာရေးထားတယ်” ဆိုတာမျိုးနဲ့ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူပြီး ရှင်းရမှာ။ ဒါမျိုး ရှက်တယ်လို့ U Tint အနေနဲ့ ပြောမယ် မထင်ပါ။ ပြောတဲ့သူရှိခဲ့ရင်လည်း ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူရမှာ ရှက်ရင် သေလိုက် လို့ပဲ ပြောဖို့ ရှိတော့တယ်)
Posted by Rita | 29/05/2010, 17:24 Reply to this comment	ကိုယ်က “ဘာရေးထားတယ်” ဆိုတာမျိုးနဲ့ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူပြီး ရှင်းရမှာ။
Posted by tint oo | 29/05/2010, 17:36 Reply to this comment	(သူငယ်ချင်း ၂ယောက်ထဲက တယောက်ကို သူနဲ့ပိုနီးစပ်တယ်လို့ပြောတဲ့ စကားက ဘယ်သူက ပိုတော်တယ်လို့ ပြောနေတာမှ မဟုတ်တာ)
Posted by Rita | 29/05/2010, 17:35 Reply to this comment	ဟုတ်ပါတယ်
Posted by tint oo | 29/05/2010, 17:40 Reply to this comment	ok. new ball please …….🙂
Posted by watote | 29/05/2010, 17:55 Reply to this comment	who is going to serve this time?
Posted by watote | 29/05/2010, 17:56 Reply to this comment	hehe
I think Rita falls asleep 😛
Posted by tint oo | 29/05/2010, 18:01 Reply to this comment	(ဦးကို)တင့်ဦး သိန်းဖေမြင့်ရဲ့ ကျော်ငြိမ်း စာအုပ်ကို ကာယံကံရှင်ကတောင် အမှာစာရေးပေးရဲတာကို အထူးအဆန်းလို့ မထင်မိပါဘူး။ ဦးနေ၀င်း အထ္ထုပတ္တိ ဒေါက်တာ မောင်မောင် ရေးလဲ ဦးနေ၀င်းက ပြုံးပြုံကြီး အမှာစာရေးပေးနိုင်မယ် ထင်တယ်။
Posted by watote | 29/05/2010, 18:23 Reply to this comment	sorry watote
Posted by tint oo | 30/05/2010, 04:11 Reply to this comment	ဦးတင့် အနေနဲ့ အဝေဖန်ခံရတဲ့ လူတွေကို စစ်ပြီးခေတ် စစ်ကြိုခေတ် ယှဉ်ပြောမယ်ဆိုရင် ဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုပါ စစ်ပြီးခေတ် စစ်ကြိုခေတ် ယှဉ်ပြောမှ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ သေချာတာကတော့ ခုနောက်ပိုင်း ဝေဖန်တဲ့လူတွေဟာ သူတို့ဝေဖန်မယ့်သူက ဘာကိုဆိုလိုလို့ ဘာကို ပြောချင်တယ် ဘယ်လိုလူ ဆိုတာကို လုံးဝမှ သဘောမပေါက်ဘဲ ပြောချင်ရာသာ စွတ်ပြောနေကြတော့တယ်။ ဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို မရောက်ဘဲ ဝေဖန်တာလဲ မက အပုပ်ချတာမျိုးလဲ မကျ ဖြစ်တော့နေတယ်။ (မှတ်ချက်။ အပုပ်ချရုံသက်သက် ရည်ရွယ်တာရေးတာတွေကတော့ လှည့်ကြည့်ဖို့ မလိုပါဘူး။ အိပ်ရေးပျက်တယ်)
Posted by Rita | 30/05/2010, 07:11 Reply to this comment	ဘွာဘွာ
Posted by tint oo | 30/05/2010, 17:11 Reply to this comment	Hi blog owner!
Posted by Nanda | 30/05/2010, 17:36 Reply to this comment	Yeah..
Posted by zizawa | 30/05/2010, 19:12 Reply to this comment	ခြေလေးချောင်း တော်လှန်ရေးကို ဘာသာပြန်တာ သခင်ဘသောင်း၊ သခင်ဗစိန်မဟုတ်ပါ။ ပထမတခေါက်ဖတ်တော့ အမှားပြင်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် post တင်တော့ အမှန် ထွက်မလာဘူး။ ဒါကိုသည်းခံဖတ်ပေးပါ။
Posted by watote | 30/05/2010, 22:18 Reply to this comment	အပိုင်း ၃မှာတော့ ၀တုတ်ပြောသလိုဘဲ ကိုယ်တို့သိတဲ့ ထဲမှာ gap တွေရှိနေတာ တွေ့ လာရပြီ
Posted by tint oo | 31/05/2010, 08:32 Reply to this comment	ကိုတင့်နဲ့ ကိုမန်းကိုကို အစောပိုင်းက ပြောတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ကိစ္စကို ကျနော် နောက်ပိုင်း အပိုင်းတွေမှာ ထည့်သွားမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဒီအပိုင်းကို သိပ်မသိဘူး။ ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားတွေ ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ။ နောက်အခက်အခဲ တခုက ဂျပန် ဘက်က အမြင်။ ကျနော်က ဂျပန်လို မဖတ်တတ်ဖူး။ ဂျပန်ကနေ ဗမာလို အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ထားတာလည်း ကျနော်အများကြီး မဖတ်ဖူးဘူး။ ဂျပန်တွေက ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို ဘယ်လို သဘောထားလဲ။ အင်္ဂလိပ်က ဂျပန်ဗိုလ်ချုပ်တို့ပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားကို ခန့်မှန်းထားတာတွေတော့ ရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်စဉ်းစားစရာ ရအောင် ၀င်ဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
Posted by zizawa | 31/05/2010, 13:45 ဟုတ်တယ် ။
Posted by tint oo | 31/05/2010, 16:41 1886-1937 *
Posted by tint oo | 31/05/2010, 17:38 Reply to this comment	ကျနော် အလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူး😦
Posted by ဇေယျာ | 31/05/2010, 09:26 Reply to this comment	again, that sort of comments justifies the effort…
Posted by zizawa | 31/05/2010, 13:21 Reply to this comment	ကိုဇေယျာ
Posted by tint oo | 31/05/2010, 16:42 Reply to this comment	ဟုတ်ကဲ့ ဦးတင့်
ခုထိတော့ မျက်စိပြူးပြီး ဖတ်နေရတုန်းပဲ။ ပြောနေကြတဲ့ အထဲမှာ ကိုယ်သိတဲ့ဟာလေးတွေက ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ညပ်ညပ် ပါလာနေတာလောက်ကိုပဲ မဆိုးဘူးလို့ ဂုဏ်ယူနေမိတာ။ ဟီးဟီး။ ဒါနဲ့ အပိုင်း ၃ ရဲ့ commnet တွေဖတ်ချင်တယ်။ လုပ်ပါဦး။
Posted by ဇေယျာ | 01/06/2010, 05:02 ဇေယျာ // 01/06/2010 at 05:02 ဟုတ်ကဲ့ ဦးတင့်
Posted by Rita | 02/06/2010, 02:48 ကိုဝတုတ်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားအကြောင်းတွေထည့်ပေးဖို့ ဆန္ဒရှိလို့ဝမ်းသာပါတယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 31/05/2010, 15:04 Reply to this comment	အဲဒီပြသနာကို တွေးမိပါတယ် ။
(ခက်တာက စာအုပ်က အီးဘွတ် ၊ နောက် ၄ရက်ကို အလုပ်ထဲမှာဘဲ ကွန်ပြူတာရမယ်ဆိုတော့ ဘယ်တော့ပြီးမယ်မသိတော့ ) 😛
Posted by tint oo | 31/05/2010, 16:52 Reply to this comment	ဂျပန် နိုင်ငံဖက်က အမြင်နဲ့ပတ်သက်ရင် ဂျပန်ခေတ်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတို တက္ကသလိုလ်မှာ scholar အနေနဲ့ လာနေစဉ်အတွင်း ပြုစုသွားတဲ့စာတမ်းထဲမှာ ပါတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့ မဖတ်ဖူးပါဘူး။ တကယ်လို့ ၀တုတ်ဆီမှာ ဂျပန်လိုရေးထားတဲ့ reference တစ်ခုခုရှိတယ် ဘာသာပြန်ဖို့လူလိုတယ်ဆိုရင် ကျနော် တခုခုကူညီနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့ conversational level လောက်ပဲ နားလည်တယ်။ Japanese literature နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ အတော်ပိန်းတယ်ပြောရမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခြားနားလည်သဘောပေါက်သူတွေကို အကူအညီတောင်းပေးပါ့မယ်။ စာတမ်း သို့မဟုတ် reference တခုခု လက်လှမ်းမှီရာမှာရှိနေတယ်ဆိုရင် ပြောပါ။ website link or PDF or scanned file တခုခုရှိရင် ကျနော်ကြိုးစားကြည့်ပေးပါမယ်။
Posted by Nanda | 31/05/2010, 18:37 Reply to this comment	ခုလို ကမ်းလှမ်းတာ ကျေးဇူးလှိုက်လှိုက်လှဲလဲတင်ပါတယ် ကိုနန္ဒရေ။ ဂျပန်ကနေ ဗမာပြန်စာအုပ်တအုပ် ကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ်။ နောက်အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်တွေ ဖတ်ရရင် မဆိုးဘူး။ ဂျပန်တွေက စင်္ကာပူကို သိမ်းနိုင်တာကို ပိုဂုဏ်ယူပုံရတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်တွေမှာ စင်္ကာပူနဲ့ မလေးကို သိမ်းတုန်းက အကြောင်းတွေ ပိုတွေ့ ရသလိုပဲ။
Posted by zizawa | 31/05/2010, 19:10 Reply to this comment	Prof. Kei Nemoto ဟာ တိုကျို တက္ကသိုလ်မှာ Burma expert အနေနဲ့လူသိများပါတယ်။ သူရေးတဲ့စာအုပ် ခေါင်းစဉ် “The locked away dreams of Burmese independence” ကတော့ ဦးအောင်ခင် ကိုးကားရေးသားဖူးတယ်ထင်တယ်။ သူ့ information ရှာကြည့်ရင်း Kyoto university archive ထဲကနေ Mary Callahan ရဲ့ Violence, warfare and politics in Colonial Burma ဆိုတဲ့စာတမ်း ရဲ့ pdf link ကိုတွေ့လို့ လိုရမယ်ရ ကူးလာပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Nanda | 31/05/2010, 19:04 Reply to this comment	Mary Callahan စာတမ်းက သူ့ရဲ့ Making Enemies ထဲမှာပါပါတယ်။ ကျနော့်မှာ ရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ Kei နဲ့လည်း လူချင်းခင်ပါတယ်။
Posted by zizawa | 31/05/2010, 19:16 Reply to this comment	ကောင်းလေစွဗျာ။ Kei နှဲ့ရင်းနှီးသူကိုမှာ သွားကမ်းလှမ်းမိတော့ မိကျောင်းမင်းရေခင်းပြမိသလိဲု ဖြစ်သွားလို့ နဲနဲတောင် ရှက်သလိုလိုပဲ။ အခု ၀တုတ်က အရေးအသားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလာတော့မှ မထူးဇတ်ခင်းပြီးနည်းနည်းနှမ်းဖြူးကြည့်အုံးမယ်။ အစကတော့ ကိုယ့်ဖာသာပဲ နားလည်ယူလိုက်တာ။ သိပ်မသေချာမှာစိုးလို့ပြန်မေးတာပါ။ ((ဒေါက်တာဘမော်တို့၊ ဦးစောတို့ရဲ့ ပါလီမန် လခစား နိုင်ငံရေးကို တိုက်မယ်လို့ပြောပြီး တဘက်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နားလည်ရ ခက်တယ်။))
Posted by Nanda | 31/05/2010, 19:33 Reply to this comment	That’s my fault, sir. အဲဒိစာပိုဒ်က နည်းနည်းကြောင်တယ်။ ကျနော်ပြောချင်တာက ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံးက ၉၁ ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကို လက်မခံဘူး။ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးပဲ လိုချင်တယ် ပြောတယ်။ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို ပါလီမန်အတွင်းအပြင် ပူးသတ်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံးထဲ ဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ အဲဒိဆုံးဖြတ်ချက်ကို နားလည်ရခက်တယ်လို့ ကျနော်ပြောချင်တာပါ။ ရှေ့ နောက် မညီဘူးထင်တယ်။ ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံးကိုယ်တိုင်က ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့လက်အောက်မှာ ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်ဆိုပြီး အဖွဲ့ပွားရှိတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့ အဲဒိကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း နံမယ်နဲ့ဝင်တာ။ ၂၈ နေရာမှာ ၃ နေရာပဲ ရတယ်။ သခင်မြ၊ သခင်အံ့ကြီး နောက်တယောက်ကို ချက်ချင်း အမှတ်မရဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပင်ဝင်သော်ငြားလည်း အမတ်လစာ မယူရဘူးလို့ စည်းကမ်းချထားတယ်။ ဆိုတော့ ၉၁ ဌာနအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်တာကို လုံးလုံကြီးးအပြစ်တင်လို့တော့ မရဘူး ထင်ပါတယ်။
Posted by zizawa | 31/05/2010, 20:15 Reply to this comment	ဦးစောနဲ့ မတွေ့ဘဲ ဘာ့ကြောင့်ဒေါက်တာ ဘမော်နဲ့တွေ့လဲ။ ဒါလည်း စဉ်းစားစရာပဲ။
Posted by tint oo | 31/05/2010, 20:10 Reply to this comment	နောက်တချက်က သခင်တွေနဲ့ ဦးစောမတည့်သလိုဘဲ ။သခင်ချင်းမတည့်တာတွေလဲ ပြင်းထန်တာတွေရှိနေတာကို သတိရမိတာလေးဖြည့်ချင်တယ်
Posted by tint oo | 31/05/2010, 20:14 Reply to this comment	ဦးစော ယူဂန္ဓာအပို့ခံရတာက ပုလဲဆိပ်ကမ်း ဗုံးကြဲခံရတဲ့ အဖြစ်အပျက် အပြီးကျမှ ဖြစ်တယ်။ ၁၉၄၁ ဒီဇင်ဘာ နောက်ပိုင်းကျမှ သူ့ကို ဂျပန်နဲ့ဆက်လို့ အင်္ဂလိပ်ကဖမ်းပြီး ပို့လိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် အစောပိုင်းမှာ သူဟာ နန်းရင်ဝန်ဖြစ်နေလို့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ မတွေ့တာထက် ကျနော် footnote မှာရေးခဲ့သလို ဂဠုန်တပ်နဲ့ သခင်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲက ပိုပြင်းထန်တယ်။ ဓားမနဲ့က ဒီလောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ပြောခဲ့သလို အတွင်းဝန်များရုံးကို ၀င်စီးတုံးက ဒေါက်တာဘမော်အစိုးရလက်ထက် ဖြစ်တဲ့အတွက် သူနဲ့ လည်း တည့်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by zizawa | 31/05/2010, 20:23 Reply to this comment	ဦးစော ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး သမိုင်းမှာ ရေးထားတာက (စာ ၅၂၃) ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂိုဏ်းက ဦးစောကိုလည်း အဖွဲ့ထဲပါဖို့ ဖိတ်တယ်ဆိုတယ်။ တခါ ရဟန်းပျို အဖွဲ့က လွတ်လပ်ရေး အတွက် တမျိုးသားလုံး ပါဝင်ကြဖို့ ၁၉၄၀ စက်တင်ဘာမှာ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အသီးသီးကို ဖိတ်ခေါ်တယ်။ ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံး၊ ဆင်းရဲသားပါတီနဲ့ ဂျီစီဘီအေ လက်ဟောင်းကြီးတွေ အားလုံး ဒီဖိတ်ခေါ်ချက်ကို လက်ခံပြီး လက်မှတ်ထိုးတယ်။ ဂဠုန် အဖွဲ့ (မျိုးချစ်အဖွဲ့) ကတောင် ရဟန်းပျိုအဖွဲ့တိုက်တွန်းချက်ကို လက်ခံ သဘောတူတယ်။ ဦးစောက သူတဦးတည်းဆန္ဒအရ လက်မှတ်မထိုးခဲ့ဘူး။ အကြောင်းပြချက်က ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးကို သူတယောက်ထဲ ရအောင်တောင်းမယ်ဆိုပြီး မထိုးဘူးလို့ စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားတယ်။ ရတယ်။ ဗမာပြည်ကို ဒိုမီနီယံ အဆင့်ပေးရေးအတွက် ချာချီနဲ့ဆွေးနွေးရ အောင် အင်္ဂလန်သွားတယ်။ ချာချီက အတွေ့မခံဘူး။ အဲဒါနဲ့ Atlantic Charter ကို လောလောလတ်လတ် ထုတ်ထားတဲ့ ရူးစဗဲ့ဆီကနေ အင်္ဂလိပ်အစိုးရကို သွယ်ဝိုက်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တာတောင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီး အင်္ဂလန်က အထွက်မှာ အမေရိကန် ၀င်တယ်။ ရူးစဗဲ့ကလည်း တရုတ်ကိစ္စကြောင့်သာ ဗမာပြည်ကို စိတ်ဝင်စားတာ ဖြစ်ပြီး ရူးစဗဲ့နဲ့လည်း တွေ့ခွင့်မရဘူး။ ဆန်ဖရန်စ္စကိုကနေ ဟိုင်ဝါယီ ဘန်ကောက်က တဆင့် ဗမာပြည်ပြန်ဖို့ စီစဉ်ထားရာမှာ သူဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက် (ပုလဲ ဆိပ်ကမ်း ဗုံးကြဲခံရပြီး နောက်တရက်)မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဟိုင်ဝါယီကိုရောက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ သူဟာ ဥရောပ ဘက်နေ ဖြတ်ပြန်ဖို့ ခရီးစဉ်ပြန်ဆွဲရတယ်။ ပေါ်တူဂီရောက်တုန်း ဂျပန် ကောင်စစ်ဝန်နဲ့ ၀င်တွေ့ရာမှာ အင်္ဂလိပ်ထောက်လှမ်းရေးက သိပြီး လမ်းမှာဘဲ ဖမ်းပြီး ယူဂန္ဓာကို လေးနှစ်ပို့ထားလိုက်တယ်။) British Library က မှတ်တမ်းတွေ အရ ဦးစော အဖမ်းခံရတဲ့ နေ့အတိအကျက ၁၉၄၂ ဇန်န၀ါရီ ၁၈ ရက် (ပြောခဲ့သလို ပုလဲ ဆိပ်ကမ်း ဗုံးကြဲခံရပြီး တလကျော်အကြာ)မှာ ဖြစ်တယ်။
Posted by zizawa | 01/06/2010, 10:12 Reply to this comment	http://shwezinu.blogspot.com/2010/04/blog-post_4208.html
Posted by Bo Bo | 31/05/2010, 22:56 Reply to this comment	ကြားထဲ သိချင်ထားတာလေး သတိရတုန်း မေးထားလိုက်ဦးမယ် အဆင်ပြေမှ ဖြေကြပါ။😀
Rohingya ဆိုတာပါ။ တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူးလိုပဲဗျ။ ဘယ်ကဘယ်လို ပေါ်လာတာလဲ မပြောတတ်ဘူး။ အရင် တခြား မြန်မာ နာမည်များရှိသလား။ ကျေးဇူး
Posted by ဇေယျာ | 01/06/2010, 05:25 Reply to this comment	http://books.google.com/books?id=YPzjT9y_fdsC&pg=PA394&lpg=PA394&dq=minami+kikan&source=bl&ots=osAGH4yG9-&sig=UGEuSLEPUNIGxhHSRptV6FMwQy0&hl=en&ei=l64ETI-GLZTw0gTZ86nMAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCQQ6AEwBA#v=onepage&q=minami%20kikan&f=false
Posted by tint oo | 01/06/2010, 07:35 Reply to this comment	Thank you, sir… ကိုဇေယျာရေ၊ ဂျပန်က သမိုင်းဆရာ ဒေါက်တာအေးချမ်းက ရိုဟင်ဂျာတွေအကြောင်း စာရေးထားတာ အရင်က ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ thesis ကို ရိုဟင်ဂျာတွေက သဘောမတူကြဘူး။ အဲ့သလောက်ပဲ သိတယ်။ ဒေါက်တာအေးချမ်းစာ အင်တာနက်ပေါ် ရှာလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
Posted by zizawa | 01/06/2010, 07:53 Reply to this comment	ရိုဟင်ဂျာဆိုလို့ တစ်ခုဖြည့်ချင်တယ်ဗျာ။
Posted by မန်းကိုကို | 01/06/2010, 10:42 Reply to this comment	စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားပါတယ်။
Posted by zizawa | 01/06/2010, 11:10 Reply to this comment	Ko Man Ko Ko,
But it will bealot difficult to put that into practice. watote
Posted by zizawa | 01/06/2010, 12:02 Reply to this comment	ကိုဝတုတ်ရေ၊ အမှတ်တမဲ့နဲ့ Burma campaign မှာ မဟာမိတ်နဲ့ ဂျပန်တွေရဲ့ ကျဆုံးစာရင်းသွားတွေ့လို့ သိမယ်ထင်ပေမယ့် ကျန်များသွားမလားလို့ လိပ်စာထည့်ပြလိုက်ပါတယ်။ . (အင်္ဂလန်ကနဲ့ ၀င်ပုံတူပါမလားတော့ မသိပါ၊)
Posted by မန်းကိုကို | 02/06/2010, 11:03 Reply to this comment	http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?entry=t129.e285
Posted by မန်းကိုကို | 02/06/2010, 11:03 Reply to this comment	Still the comment system in the new post doesn’t work.
Posted by Nanda | 02/06/2010, 19:36 Reply to this comment	I don’t think I said KMT get help from the Soviet Russi, did I?
Posted by zizawa | 02/06/2010, 19:51 Reply to this comment	Perhaps you misread Communist Internationale (Comintern) as KMT???
Posted by zizawa | 02/06/2010, 19:57 Reply to this comment	Oh ya, I misread Comintern (ကွန်မင်တန်) as KMT. But, coincidently, history of KMT in Wiki also says – In 1920, Sun and the KMT were restored in Guangdong. In 1923, the KMT and its government accepted aid from the Soviet Union after being denied recognition by the western powers. Soviet advisers – the most prominent of whom was Mikhail Borodin, an agent of the Comintern – began to arrive in China in 1923 to aid in the reorganization and consolidation of the KMT along the lines of the Communist Party of the Soviet Union, establishingaLeninist party structure that lasted into the 1990s.
Posted by Nanda | 03/06/2010, 03:43 Reply to this comment	I think we will be distracted from the main topic if we discuss china’s politics in 1900s . In short , it wasacomplex struggle between Manchu empire , chinese warlords , Sun’s nationalists , Chan’s rightist Komington , Mao’s leftists and some other anarchists . You need to throw in Japan , Russia and western powers as well .
Posted by tint oo | 03/06/2010, 11:14 Reply to this comment	True. The next chapter will focus on 1)the formation of modern Burmese army 2)Thakhin’s consolidating their place in Burmese politics as they then held positions of power and 3)the deteriorating relationships between Burman(Bamar) and ethnic nationalities which have their roots in earlier colonial period but made worse during that period.
Again my apologies to all who have been unable to leave comments on later posts. Watote
Posted by zizawa | 03/06/2010, 14:39 “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမူလကြံရွယ်ထားတာက ဗမာပြည်ဝင်ပြီး မကြာခင် လွတ်လပ်ရေးကြေငြာနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် သူဟာ မီနာမီကီကန်းက ကာနယ် ဆူဇီကီး (ဗိုလ်မိုးကြိုး)အမိန့်ကို ယူရတာဖြစ်ပြီး ဗိုလ်မိုးကြိုးကိုယ်တိုင်က ဗမာပြည်ကို ၀င်တဲ့ ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ (15th Army) အမှတ် ၁၅ တပ်မတော်ရဲ့ အမိန့်ကိုဘဲ နာခံ လှုပ်ရှားခဲ့ရတာ ဖြစ်တယ်။”
Posted by tint oo | 03/06/2010, 07:41 Reply to this comment	“ပြောခဲ့တဲ့ နာကျည်းမှုတွေစွက်နေခဲ့တဲ့ ဗမာ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အရှိန်ဟာ အထိန်းအကွပ် ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့ဘီအိုင်အေလက်ထက်မှာ ကရင်လူမျိုးတွေနဲ့ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုကို အားကောင်းစေခဲ့တယ်။”
Posted by tint oo | 05/06/2010, 16:06 Reply to this comment	“သခင်သန်းထွန်းတို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့၊ သခင်ချစ်တို့လို အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့် ကရင်ဗမာ ကိစ္စဟာငြိမ်သွားပြီး”၊
Posted by မန်းကိုကို | 08/06/2010, 08:01 Reply to this comment	ကိုမန်းကိုကိုပျောက်လှချီလားဗျ
Posted by tint oo | 08/06/2010, 18:17 Thanks, Ko Tint. ဂျပန်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကရင်တွေနဲ့ ကုလားတွေကို ဘီအိုင်အေယူနီဖောင်းဝတ် တချို့ က နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်တာကို ထိန်းဖို့လုပ်တယ်။ ဂျပန်ခေတ်မှာ အခံရဆုံးက တရုတ်တွေပဲ။ ကရင်နဲ့ ကုလားကို ဂျပန်က အကာအကွယ်ပေးတာက ကရင်တွေကိုလည်း ဂျပန်က သင့်တော်တဲ့ နေရာမှာ သုံးဖို့ ရည်ရွယ်သလို ကုလားကျတော့လည်း အိန္ဒိယကို တိုက်ရာမှာ အိန္ဒိယက ကုလားတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုလိုချင်တဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်။
Posted by zizawa | 08/06/2010, 21:55 ကျွန်တော့်ရဲ့ ခုလာမဲ့ အပိုင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားကိစ္စကို ဘယ်လိုကိုင်သလဲဆိုတာ နည်းနည်းပြောထားပါတယ်။ ခုနည်းနည်း ကြိုပြောရရင် ၁၉၄၅ ဖေဖော်ဝါရီမှာ ကရင်တိုင်းရင်းသားများသို့ လို့အစချီထားတဲ့ စာထုတ်တယ်။ အဓိက ကတော့ ဖက်ဆစ်ကို အတူလက်တွဲတိုက်ဖို့ပါ။ ကရင်တွေတင်မက ကချင်တွေ ချင်းတွေ
Posted by zizawa | 08/06/2010, 21:49 ပျောက်စရာရှိလို့ ပျောက်နေတာပါ ကိုတင့်ဦးရေ၊
Posted by မန်းကိုကို | 09/06/2010, 01:31 Reply to this comment	ကိုမန်းကိုရေ
Posted by zizawa | 09/06/2010, 07:10 ‘ဒီတော့ လိုရင်းက compromise လုပ်ကြဖို့နဲ့ multi-culturalism ဆိုတာမျိုးတွေကို နားလည်လာကြအောင် လူမှုသိပ္ပံပညာ၊ ဗဟုသုတတွေ ထွန်းကားလာအောင်လုပ်ကြဖို့ပဲလို့ ယူဆပါတယ်။’
Posted by zizawa | 09/06/2010, 07:27 “အဲ၊ တစ်ခုသတိရလာပြီဗျ၊ ကျနော့အဖေ ငယ်ငယ်တုံးက (သူ့အခေါ်အဝေါ်အရ) ဗမာစစ်သားတွေ တက်လာတော့ သူတို့ရွာလုံးကျွတ်ကို ဝင်လုသွားတယ်လို့ ပြောပြဖူးပါတယ်။ ”
Posted by tint oo | 09/06/2010, 09:52 well said, sir..
Posted by zizawa | 09/06/2010, 09:56 ဒုတိယစစ်ရေးအနီးစပ်ဆုံးလို့ ခေါ်ရမဲ့လူစုကတော့ ယူဂျီတွေပါဘဲ ။ သူတို့ သင်တန်းဆရာ ( နောင် ) ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းမောင်မောင်ရဲ့လက်အောက်မှာ လက်နက်ငယ်တွေ ကိုင်နည်းပစ်နည်း စစ်ခွာ စစ်ချီ စစ်ခံ နဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်များဆိုပြီး ၃လလောက် သင်ခဲ့ ရသူတွေပေါ့ ။(စာကျန်ခဲ့ လို့ ) စာတွေ့ သက်သက်သာ သင်ခဲ့ရခြင်း လက်တွေ့ တော့webley revolver လို၊ SMLE လိုကိုတောင် ကိုင်ဘူးဘို့ဝေး မမြင်ခဲ့ရဘူးပါ ။
Posted by tint oo | 09/06/2010, 09:56 “တစ်ခုရှိတာကတော့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် အသတ်ခံခဲ့ကြရတဲ့ ကရင်တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံကိုတော့ ဖြတ်ကနဲ တွေ့မိဖူးပါတယ်၊ သာမန် အနည်းအကျဉ်း တိုက်ကြခိုက်ကြထက်တော့ အများကြီးပိုပုံရပါတယ်။ ”
Posted by tint oo | 09/06/2010, 10:01 By the way, ko tint, did you attendawedding this week? Woburn Abbey?
Posted by zizawa | 09/06/2010, 10:07 No
Have you seenaman that you thought might be me? I rarely attend any social functions .😛
Posted by tint oo | 09/06/2010, 10:15 ကိုတင့်ဦးရေ၊ ကျနော်ဆိုလိုတာက သာမန်တိုက်ခိုက်ကြလို့ သေတာမျိုးထက် massacre သဘော သက်ရောက်နေတာတွေကို ပြောတာပါ။ နောင်မဖြစ်အောင်သာ သင်္ခန်းစာယူကြဖို့ လုပ်ကြရပါတော့မယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 09/06/2010, 11:00 Comment system လေး လုပ်ပါဦး ကိုဝတုတ်ရေ .
Posted by ဇေယျာ | 07/06/2010, 09:21 Reply to this comment	Sir, I don’t know how to correct it really. Please try leaving your comments in earlier posts. rgds,
Posted by zizawa | 07/06/2010, 10:21 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...